HERBICIDE FOR ARI IYO SARREEN "AXIAL": TILMAAMAHA ISTICMAALKA - SOOSAARKA DALAGGA
Qulqulka Axida: Maaddooyinka firfircoon, barista, heerka isticmaalka
Marka ay timaado cereals, su'aasha ayaa soo baxaysa sida looga ilaaliyo cayayaanka kala duwan. Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa habka kiimikada ee loo xakameeyo cayayaanka khudradda - "xoqitaanka" xajmiga ".
Nooca foomka iyo bixinta
Walaxda firfircoon ee geedaha "Axial" waa pinoxaden-cloxintinset mexyl. Diiradeeda diyaargarowga waa 45 g / l.
Waa muhiim! Macnaheedu waa walxaha sunta fudud ee fasalka seddexaad ee khatarta. Waxay khatar ugu jirtaa inay kaydiso kalluunka, shinnida, shinnida.
Iibsiga waxaa loola jeedaa dhirta caagga ah ee 5 l. Herbicide waxaa loo soo saaraa qaab ah emulsion concentrate.
Waxay u dhigantaa tiro ka mid ah herbicides oo loo isticmaalo qashinka cawska iyo sarreenka. Sida ku qoran tilmaamaha, miro, buunshaha, boomaato, digriiga digaaga iyo haramaha kale ee sanadlaha ah ayaa si gaar ah ugu nugul daawada.
Si loo ilaaliyo qamadiga iyo cawska, waxa kale oo ay isticmaalaan: "Lancelot", "Corsair", "Dialen Super", "Hermes", "Caribou", "Cowboy", "Eraser Extra", "Prima", "Lontrel".
Wax ku oolka ah ee la dagaallama miro duurka.
Wuxuu saameeyaa noocyo kala duwan oo caws ah.
Aad u fiican sameynta taangiyada.
Waa mid degan oo aan ka hortagayn (badhkii nus saac ka dib marka la warshadeeyo "Axial") roobku maaha mid cabsi badan).
Ma jiraan wax shuruud u ah wareegga dalagga.
Ma taqaanaa? Waxaa la ogyahay in herbicides loo isticmaalay ulajeeddooyin milatari, tusaale, Wakiil Orange oo ka socda Maraykanka oo ku yaal Dagaalkii Vietnam.
"Axial" u dhaqmaan si xushmad leh, garaaceen haramaha kaliya. Helitaanka qaybta dhulka ee weedhaha. waxay ku dhex gudubtaa gudaha iyo dib-u-sameynta dhammaan nidaamka gudaha gudaha ee geedka.
Sida loo isticmaalo buufinta
Si loo wanaajiyo waxtarka daaweynta "Axial", waa in si adag loo fuliyaa si waafaqsan tilmaamaha isticmaalka geedka xawayaanka.
Daaweynta waxaa la samayn karaa horaantii markii ay u kulushahay ilaa +5 ° S. Laakiin ugu fiican dhammaan geedi socodka goobaha heerkul ah + 10 ... +25 ° S. Sug sugitaanka cimilada xasiloon - oo ka soo jeeda qabow illaa kululaynta waxay yaraynaysaa waxtarka shaqada. Moobeydu waa in la sameeyaa subaxa ama fiidkii. Waa inaaney noqon dabaysha.
Waxtarka "Axial" wuxuu si toos ah ugu xiran yahay sida ugu wanaagsan ee loo qaybiyo goobta. Sidaa darteed, buufinta waxaa ugu wanaagsan in lagu sameeyo buufinta ganaaxa.
Waa muhiim! Ha u oggolaanin in daroogada loo wareejiyo dhirta deriska ah!
"Axial" waxaa loo isticmaali karaa inta lagu jiro xilliga sii kordhaya ee shaciir iyo sarreen. Ugu wanaagsan ee dhan, waxay saameyn doontaa cawska, marka ay horay u muuqday laba ama saddex caleemo.
Qiyaasta isticmaalka geedo "Axial" oo waafaqsan dhaqan dhaqameed:
geedi gucawada guga - laga bilaabo 0.7 illaa 1 l hektar hektar;
geedi socodka xilliga qaboobaha iyo guga - laga bilaabo 0.7 l ilaa 1.3 l hektar hektar.
Waa muhiim! Qiyaasta ugu weyn waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya markii goobta ay si adag u xiirto iyo xaaladaha koritaanka miraha aan fiicnayn.
Xawaaraha saamaynta leh
Wuxuu bilaabaa inuu shaqeeyo ka dib 48 saacadood. Natiijada muuqata waxay noqoneysaa mid la dareemo laba toddobaad gudahood. Dhimashada buuxda ee cawska ee aagga daweynta ayaa dhacaya bil gudaheed. Ereyga waxaa laga yaabaa inuu kordho ama yareeyo qiyaastii todobaad - saameynta daawada waxay ku xiran tahay xaaladaha iyo nooca warshadda.
Ilaalinta goobta laba bilood ah.
Ma taqaanaa? Hey'ad cilmi baaris caalami ah oo kansar ah ayaa aqoonsatay qaar ka mid ah herbicides (glyphosate, 2,4-D) sida walxaha kordhiya suurtagalnimada kansarka.
Hawlaha waxaa lagu fulin karaa oo kaliya marka ay joogaan qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed:
Ka dib markaad dhamaystirto ilaalinta shaqada lagama maarmaanka ah waa in la nadiifiyaa.
Herbicide waa halis u ah maqaarka, xuubka xuubka iyo xiriirka habka dheef-shiidka.
Baro sida isticmaalka sunta cayayaanka saameyn ku yeelato caafimaadka iyo deegaanka.
Haddii qofku ku sumoobo daroogada "Axial", ka dibna:
isaga qaado goobta shaqada;
Si taxadar leh uga qaad qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed si aad uga hortagto wixii haraadiga ah ee daroogada ka soo horjeeda adiga iyo dhibbanaha;
haddii ay dhacdo dhaawac isha, ku sii biyo raaci biyo;
haddii maqaarka uu waxyeelo, isticmaal maro qallalan si aad uga soo saarto geedaha dheeraadka ah sida ugu macquulsan. Si degan u biyo raaci meelaha ay dhibaatadu saameysey. Xitaa haddii ay jirto xaalad xiriir la leh dharka, meelaha maqaarka ee suurtagalka ah waa in si fiican loo dhaqo!
Haddii daroogada la liqo, isla markiiba afka ku dhaq. Sii dhibbanaha in la cabbo dhowr koob oo biyo ah iyo kaarbiidh firfircoon. Si aad matagid matag. U hubso inaad haysato calaamadda daroogada oo u sheeg dhakhtarka;
U sinaanta iyo daawooyinka kale
Badeecadu waa ku habboon tahay cayayaanka, cagaarshowga iyo fungicides badankood. Waxaa macquul ah in la abuuro taangiyada daroogada. Haddii aad sameysid isku-dar taangiyo, ha isku darin alaabooyinka aan la dhigin.
Waa muhiim! Ka hor intaadan isticmaalin daroogooyinka kale, hubi inaad tijaabiso is-waafajinta.
"Axial" waxaa lagula talinayaa in lagu kaydiyo dhismayaasha kuwaas oo si gaar ah loogu talagalay kaydinta daawooyinka kiimikada. Ka ilaali qoraxda tooska ah. Kaydinta waa inay ahaato mid qalalan oo hawo fiican leh. Heerkulka heerkulka - min -5 ilaa +35 ° C. Ku kaydi geedo yaryar baakidhka asalka ah.
Waa muhiim! Qaadista 2 mitir ee dhererka waa la mamnuucayaa!
Haddii dhammaan shuruudaha kor ku xusan, nolosha shafka waa 3 sano.
Axial wuxuu noqon doonaa qalab aan loo baahnayn oo la dagaallanka cawska. Si taxadar leh u akhri tilmaamaha daroogada - fulinta dhabta ah ee tilmaamuhu wuxuu gaari doonaa waxtarka ugu sareeya ee suurtogalka ah.